समय सापेक्ष शिक्षा - Pradesh Today समय सापेक्ष शिक्षा - Pradesh Today
समय सापेक्ष शिक्षा
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले शैक्षिक सत्रलाई विशेष रुपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई अब्वल बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालयको सुधारको योजनाको बारेमा सम्राट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३, दाङका प्रिन्सिपल विमल गौतमसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ, तपाईको योजना के छ ?
अवश्य पनि नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६ शुरु भएको छ । प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि हामीले आफ्नो स्कुलको बारेमा आम अभिभावकहरुलाई बुझाउने अर्थात् विद्यालयका विषेशताहरुबारे जानकारी गराउने र भर्ना गर्ने कार्य गरेका छौँ ।
ग्रामीण परिवेशमा रहेको हाम्रो विद्यालयले प्रदान गरिरहेका सेवा सुविधा तथा गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा आम अभिभावकहरुलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले अभिभावक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छाँै र सोहि अनुरुप नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीहरुको भर्ना गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न गरेका छौँ ।
अन्य वर्षहरु जस्तै उत्साहजनक रुपमा यसवर्ष पनि नयाँ विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्ने कार्य गरेका छौ । र पठनपाठन समेत शुरु भै सकेको छ ।
निजी शिक्षण संस्थाहरु सेवामुखीभन्दा नाफामुखी बढी भएको देखिन्छ, किन यस्तो भएको होला ?
यो आम मानिसहरुको गलत बुझाई हो र निजी विद्यालयहरुलाई लगाउने मित्थ्या आरोप मात्र हो । किनकि तपाईले भने जस्तै निजी विद्यालयहरु नाफामुखी भन्दा सेवामुखी धेरै छन् ।
तपाई आफै भन्नुस् कि एकजना श्रमिकले दैनिक ज्याला भण्डै एक हजार लिनुहुन्छ तर आफ्नो बच्चाको मासिक शुल्क महिनाको एक हजार तिर्नु हुन्छ भने यो कहाँको नाफामुखी भयो ।
अब भन्नुस् हो निजी विद्यालयमा हामीले लगानी गरेका छौँ त्यसको उचित प्रतिफल त लिनु प¥यो नि । हामीले पनि लगानीका लागि बैंकबाट ब्याजमा पैसा लिएका छौँ, त्यसको उचित नाफा लिने कि नलिने तपाई आफै भन्नुस् ।
त्यसैले म आम अभिभावकहरु तथा पाठकहरुलाई जानकारी गराउन चाहान्छु कि निजी विद्यालयहरु सेवामूलक ब्यवसायहरु हुन् । गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गरेर विद्यार्थीबाट लिएको न्यून शुल्कबाट खर्च कटाएर केही प्रतिशत नाफा भने लिएका छाँै । अब यसलाई नाफामुखी भन्नुस् वा सेवामुखी ।
विद्यार्थीमा संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदर सम्मान हरायो भन्छन्, के साँच्चि हो ?
हो तपाईले अत्यन्तै मार्मिक र महङ्खवपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । आधुनिकताका नाममा अहिले विद्यार्थीहरुमा संस्कार, सभ्यता र ब्यवहारिकता हराउँदै गएको पक्कै हो ।
यो दुखद् कुरा पनि हो । तर हामीले विद्यालयको तर्फबाट नियमित रुपमा अभिभावकहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्र्दै उनीहरुलाई साँस्कारिक र ब्यवहारिक बनाउने कुरामा लागिपरेका छौँ ।
जसका लागि विभिन्न समयमा विद्यालयमा संस्कार तथा अनुशासनका कक्षाहरु सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर प्रत्येक कक्षाहरुमा केही समय साँस्कारिक र अनुशासित बन्न प्रेरित गर्ने गरी केही टिप्सहरु दिने कामसमेत गरेका छौँ ।
यसले पक्कै पनि हाम्रा विद्यार्थीहरु साँस्कारिक र ब्यवहारिक हुनेछन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसैगरी नियमित रुपमा अभिभावकहरुसँगको भेटघाट र समन्वयले पनि हाम्रा विद्यार्थी हामीले चाहेको र सोचेको जस्तै बन्ने कुरामा हामी निश्चिन्त छाँै ।
युवालाई शैक्षिक नेतृत्व आएको छ यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, साँच्ची युवाहरुले सञ्चालन गरेका सबैखालका संस्थाहरु सफल र राम्रो ढंगले सञ्चालन भैरहेका छन् । हामीले देखेका पनि छौँ र सुनेका पनि छौँ कि युवाहरुले आफै सञ्चालन गरेका संस्थाहरु राम्रो तरिकाले सञ्चालन भैरहेका छन् । यहि क्रममा मैले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने अर्थात् यसको ब्यवस्थापन, रेखदेखलगायत सबै खालको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु ।
यसमा मलाई गर्व छ । मलाई यति ठूलो र महान् (मलाई यो जिम्मेवारीलाई महान् भन्न मन लाग्यो) जिम्मेवारी दिने सञ्चालक समितिप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । मेरो क्षमतालाई कदर गर्दै सञ्चालक समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा सफल बनाउन अहोरात्र लागिपरेको छु ।
साथसाथै मेरो जिम्मेवारी भनेको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्रछात्राहरु साँस्कारिक, ब्यवहारिक र अब्वल दर्जाको बनाउनका लागि म र मेरो सम्पूर्ण टिमसमेत अहोरात्र लागि परेका छौँ र हाम्रो खटाई र मिहिनेतलाई हाम्रा अभिभावकहरुले राम्रोसँग मूल्यांकन समेत गरिदिनु भएको छ त्यसमा हामी खुशी छौँ ।
हो, केही युवाहरुमा त्यस्तो बानी वा ब्यवहार हुनसक्छ । स्वभाव अनुसार कोही धेरै बोल्ने वा अर्काको आलोचनामा समय खर्च गरेर बस्ने बानी पनि हुनसक्छ । तर यसो गर्नु कुनै हिसावले पनि राम्रो होइन ।
आफू केही नगर्ने तर सबैकुरा सरकारले यस्तो गरेन, त्यस्तो गरेन वा फलानोले गर्न सकेन भन्नुभन्दा पनि युवाहरु देशको विकास र समृद्धिका लागि लाग्न अत्यन्तै जरुरी छ ।
यदि हामी युवाहरुले कुरा मात्र गर्ने हो भने भोलि देश कसले चलाउने वा हाम्रो समाजमा कसले राम्रो गर्ने ? हामी आफै कसरी राम्रो बन्ने यी यावत सवालहरु छन् । त्यसैले पनि युवाहरुको उर्जाशील समय खेर नफालौँ केही उत्पादनमूलक वा ब्यवसायमूलक वा समाज सेवामा लगाऊ भन्न चाहन्छु ।
विद्यालय भन्ने वित्तिकै अध्ययन अध्यापन गर्ने ठाउँ हो । यसलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । हिजो जसरी हामीले विद्यालय चलायौँ अबका दिनमा त्यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिदैन ।
सम्राट फरक अभियानमा छ भन्नुहुन्छ र अरु भन्दा फरक के छ ?
पक्कै पनि विद्यालयहरुले दिने भनेको गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । सबैले आफ्नो विद्यालयलाई अब्वल र राम्रो बनाउन चाहन्छन् र सोहि अनुरुप भौतिक पूर्वाधारलगायत पठनपाठनलाई चुस्त र दुुुरुस्त बनाउन चाहन्छन् । हामीले पनि त्यहि गरेका छौँ ।
हाम्रा बालबालिकाहरुलाई विद्यालय छोडेर बाहिर जाँदा सवै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, अनुशासित र सबैसँग मिल्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो अभियानका कारण पनि हामी अरुभन्दा फरक छौँ भन्ने हो ।
र ग्रामीण परिवेश, सुन्दर, शान्त वातावरण सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा विद्यालय भएको र हालसम्म विद्यालय बाहिर गएका विद्यार्थीहरुले देखाएको लगनशीलता र प्रगति नै हो हाम्रो पहिचान वा फरकपन भनेको ।
जिल्लामा विद्यालयको नेतृत्व पाउने थोरै युवामध्ये तपाई पनि एक हो र विद्यालय सुधारका लागि तपाईको योजना के छ ?
विद्यालय भन्ने वित्तिकै अध्ययन अध्यापन गर्ने ठाउँ हो । यसलाई समयसापेक्ष रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हिजो जसरी हामीले विद्यालय चलायौँ अबका दिनमा त्यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिदैन ।
समय फेरिएसँगै नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास भएका छन् । हामी डिजिटल युगमा छौँ त्यसैले सकेजति विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन गराउने छौं ।
पूर्णरुपमा विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालय बनाउन लागि पर्ने । बालबालिकाहरुलाई पठनपाठनका अलावा शारीरिक तथा मानसिक विकास हुने खालका विभिन्न क्रियाकलाप, खेलकुद लगायतमा विषेश जोड दिने आदि शैक्षिक सुधारका योजनाहरु रहेका छन ।
विद्यार्थी बढाउने मात्रै हो की गुणस्तर र सिकाइलाई महत्व हुन्छ ?
हो, तपाईले महङ्खवपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । अब हामीले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन । अब हामीले दिने भनेकै गुणस्तरीय शिक्षा हो । त्यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ गएको पनि छ ।
तपाईले देखिरहनु भएको छ आज निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको चाप । यदि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा नदिएको भए यति धेरै निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा यति धेरै संख्यामा विद्यार्थी पक्कै पनि हुने थिएनन् । अर्को कुरा तपाईले प्रत्येक वर्ष हेरि रहनु सुनिरहनुभएको छ ।
चाहे त्यो एसईई परीक्षा होस्, कक्षा ८ को परीक्षा वा सरकारी निकायबाट लिईने परीक्षाहरुमा निजी विद्यालयको नतिजाको प्रतिशत । त्यसले पनि निजी विद्यालयहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नकै लागि खुलेका हुन् र दिईरहेका छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
सबैभन्दा पहिला म तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय पत्रिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो आफ्नो विद्यालय र समग्र शिक्षाको बारेमा आफ्ना धारणाहरु आम अभिभावक र पाठकहरु सामु राख्ने अवसर दिनुभएकोमा ।
साथै अन्त्यमा सबै बालबालिकाहरु शिक्षाको ज्योति पाउनबाट बञ्चित नहोउन र सरकारले लिएको सबै बालबालिकहरुलाई विद्यालयसम्म पु¥याउने लक्ष्य सफल रहोस् शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।